कलियुगका कुरा: भेट्रानका गफ...
बिबिसी नेपाली सेवाका प्रमुख (पत्रकार) रवीन्द्र मिश्रले लेखेको पुस्तक 'भूमध्यरेखा अर्थहीनताभित्र अर्थ खोज्दा' को विमोचनाँ गाको आज। चार जनाले भाषण ठोकेका थिए। तर ती मध्ये दुई जना नेपालका भेट्रानहरुको कुरा दिमागाँघुमिराछ। धेरैजसो पत्रकारहरु र केही स्तम्भ लेखकले भरिएको ठाममा माओवादीका बाबुराम भट्टराईले भाषणाँ भने - मलाई पनि तपाइहरु जस्तै हुने मन छ। अब १०/१५ वर्षपछि राजनीति छाडेर तपाइहरुकै कित्तामा आउँछु। (हुन त प्रचण्डले अब धेरै वर्ष बाबुराम काम्रेडलाई पार्टीआँ टिक्न देलान् जस्तो लाउदैन)।
अर्को कुरा चाहिँ पत्रकार विजयकुमार पाण्डेले आफूले सम्पादन गर्ने पत्रिका आँफैले नपढ्ने गरेको बताए। उन्ले भने- 'नेपाल' पत्रिका सम्पादन गर्दा ४ पेज मात्र पढ्थे‌। अरु जस जसले जे जे लेखे पनि छापिन्थ्यो।
दुबै जनाको गफ त होइन होला। मलाई भने आँफू गफाडी भएर होला जस्ले जे भने नि गफै लाग्छ...
Prabesh November 14, 2010 at 8:56 PM
सहि हो दाइ..गफै हो..
Aakar November 14, 2010 at 9:06 PM
गफै दिएछन्, मर्ने गरि ! :D
होइन दीपक जी ४ महिने जागिरमा सँगै हुँदा त तपाईं गफाडी जस्तो लाग्दैनथ्यो अचेल कसरी आँफै पनि गफाडी हुनुभयो ?
Manoj Kumar Timalsina "chari" November 14, 2010 at 10:24 PM
आँफू गफाडी भएर होला जस्ले जे भने नि गफै लाग्छ...